Hodges Direct, Hodges विश्वविद्यालयको एक प्रभागको साथ कार्यबल कौशल प्राप्त गर्नुहोस्
विभाग: Hodges प्रत्यक्ष
HU Direct मा स्वागत छ, होज विश्वविद्यालयको एक एक्सप्रेस डिभिजन
होज विश्वविद्यालयले कार्यबल निर्देशित प्रमाणपत्रहरू र डिग्रीहरू प्रदान गर्दछ जुन क्षेत्र र त्यसपारिका क्षेत्रहरूमा माग गर्दछ। क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य सेवा, प्रविधि, व्यवसाय, व्यवस्थापन, र वित्त समावेश छ। विद्यार्थीहरूले क्याम्पस, अनलाइन, र हाम्रो टेक्नोलोजी एन्हांस्ड क्लासरूमहरू (TEC) मार्फत कक्षा लिन सक्छन्, जसले तिनीहरूलाई कहिँ पनि अनलाइन लाइभ कक्षामा जानको लागि अनुमति दिन्छ। होज विश्वविद्यालय पनि एक उत्कृष्ट प्रदान गर्दछ दोस्रो भाषाको रूपमा अंग्रेजी (ESL) प्रमाणपत्र कार्यक्रम.
लेह एकर गुडविल स्थानबाट सुरू गरेर, एचयु डाइरेक्टको कक्षा कोठामा पहुँच र निर्देशकको कार्यालयमा पहुँच हुनेछ, सहि लेही एकरमा, सद्भावनाको सीआरसीमा। कक्षा र कार्यशालाहरू दिन र समयमा लेह एक्रस समुदायमा आयोजित गर्न सकिन्छ जुन समुदायका बासिन्दाहरूलाई अनुरूप हुन्छ। होज विश्वविद्यालय वयस्क शिक्षार्थीहरूको विशेषज्ञताको लागि परिचित छ, यसैले प्राय जसो कार्यक्रमहरू साँझमा र सप्ताहन्तमा क्याम्पसमा, वा अनलाइनमा गरिन्छन्।
एक अप्रिय गठबन्धन - होज विश्वविद्यालय र सद्भावना उद्योगहरू
पहिलो नजर मा, यो Hodges विश्वविद्यालय र दक्षिण पश्चिम फ्लोरिडा को गुडविल इंडस्ट्रीज धेरै समान छैन। यद्यपि दुबै संगठनहरू सँगै मिलेर काम गर्दा हामी हाम्रो क्षेत्रमा कार्यबल प्रशिक्षणको आवश्यकतालाई राम्रोसँग समाधान गर्न सक्छौं।
दुबै गुडविल र होज युनिभर्सिटीले पहुँचयोग्य हुन कडा मेहनत गर्छ, तर अर्को चरणमा यसलाई लैजान अर्को तरीका पनि छ। COVID-19 को कारणले भएको उथलपुथलका कारण क्यारियर शुरू गर्न वा परिवर्तन गर्न चाहनेहरूको लागि सद्भावनाले बलियो सुरुवात प्रदान गर्दछ। होज विश्वविद्यालयले एचयू डाइरेक्ट, होजजेस विश्वविद्यालयको एक एक्सप्रेस डिभिजन नामक नयाँ पहल शुरू गरेको छ।
यो गठबन्धनले बसोबास गर्नेहरूलाई उनीहरूको समुदायमा अधिक शैक्षिक र कार्यबल प्रशिक्षण अवसरहरू ल्याउँदछ।
अधिक जानकारीको लागि आज हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्!
HU तपाईको लागि सीधा छ?
यदि तपाईं आफ्नो कार्यस्थल सीप विस्तार गर्न चाहानुहुन्छ भने, HU Direct तपाईंको लागि हो!
कुन पाठ्यक्रमहरू होजहरू सिधा उपलब्ध छन्?
कक्षाहरू राति र सप्ताहन्तहरू गुडविल ईण्डस्ट्रीज लेह एकड़ समुदाय संसाधन केन्द्रहरू (सीआरसी) स्थानमा उपलब्ध हुनेछन्। पाठ्यक्रमहरूले समावेश गर्दछ:
अंग्रेजी व्याकरण अनलाइन
पहिलो लाइन सुपरवाइजर
घर स्वामित्वको लागि मार्ग
प्रत्यक्ष समर्थन पेशेवरहरू
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार विद्यार्थीहरूले नयाँ ज्ञान र सीप प्राप्त गर्दा आशा र नयाँ आत्मविश्वासको हेराइले उनीहरूको सपनाहरू महसुस गर्न मद्दत गर्दछ। यो एक सकारात्मक प्रभाव हो जुन पुस्तासम्म पुग्न अगाडि बढ्नेछ।